रिमाल– एक दु:खान्त- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
रिमाल– एक दु:खान्त
गोपालप्रसाद रिमाल कटुयथार्थवादी स्वप्नशील कवि थिए । उनका युगीन कालजयी कृति जहिले पढे पनि तिनले पाठकको मनमा एउटा अव्यक्त र गहिरो विरोधको भाव उत्पन्न गर्छन् । रिमालको जन्मजयन्ती (विसं १९७५ जेठ–१3, रिमालको जन्म मिति जेठ १८ कि १३ भन्नेमा सबैको एकैमत नदेखिए तापनि रिमालका सिर्जनामाथि विशेष अध्यन गरेका केशवप्रसाद उपाध्यायले जेठ १३ गते नै रिमालको जन्म भएको उल्लेख गरेका छन् ।) को साइतमा अर्का अग्रज कवि शैलेन्द्र साकारको रिमाल–सम्झना :
जेष्ठ १४, २०७८ शैलेन्द्र साकार
मेरा अग्रज कविहरूमा मैले सम्झिरहने नाम हुन्— गोपालप्रसाद रिमाल, मोहन कोइराला, भूपी शेरचन र वासु शशी । हुन त यीबाहेकका कृष्णभक्त श्रेष्ठ, द्वारिका श्रेष्ठ, उपेन्द्र श्रेष्ठ, कालीप्रसाद रिजाल, क्षेत्रप्रताप अधिकारीहरू पनि मेरो सम्झनामा हरपल आइरहन्छन् । कैयौं दिवंगत भइसके र केही अझै छन् । राम्रा लेखकहरूमा रमेश विकल, भैरव अर्याल, शंकर लामिछाने र पारिजातहरू मेरो सम्झनाको आकाशमा झुल्किरहन्छन् ।
संक्षिप्त सांस्कृतिक कार्यक्रम (मद्यपान) मा बाँचुन्जेल मसँगै हिँड्न, बस्न र गफ गर्न रुचाउने भवानी घिमिरे, हरिभक्त कटुवाललाई ‘स्वर्गीय’ लेख्न अझ पनि मन मान्दैन । आफूभन्दा निकै जेठो भए पनि मलाई अत्यन्त माया गर्नुहुने बालकृष्ण सम, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, केदारमान व्यथितहरूका कीर्तिलाई कसैले पनि धमिल्याउनु हुन्न भन्ने मलाई सदा लागिरहन्छ । त्यस्ता विलक्षण व्यक्तित्वहरूको सान्निध्यमै रहेर मैले आफ्नो सम्पूर्ण युवाकाल बिताएको सम्झेर अझै पनि मलाई आश्चर्य लागिरहन्छ । अझ आश्चर्य त लाग्छ, त्यो क्षणलाई सम्झेर जुनबेला मैले भर्खर काठमाडौंमा पाइला टेकेको थिएँ । त्यही बेलाको एउटा संस्मरण यहाँ कोर्नेछु :
एउटा पातलो, खस आर्यजस्तो देखिने मान्छे भूगोपार्कतिरबाट दौडँदै पीपलको बोटनेर आइपुग्यो ।
सबै कराए, ‘ऊ बहुलाहा कवि !’ (खासमा यो कटु–शब्द म यहाँ प्रयोग गर्न चाहन्नथें । यो शब्द अरूको भनाइमा प्रयोग गरिएको छ । यसको लागि क्षमा चाहन्छु ।)
तानिरहेको चुरोट फ्यात्त फालेर मैले त्यता हेरें ।
मसँगै हाँस्दै गफ गरिरहेका रोचक घिमिरे, भैरव अर्याल र सँगै उभिएका अरू एक/दुईजनाले पनि झ्वाट्ट त्यता हेरे ।
रोचकले भने, ‘खै राँचीबाट उपचार गराएर फर्केको भन्ने सुनेको थिएँ । निको भएर आएका होलान् भन्ने लागेको थियो, उस्तै देख्छु ।’ भैरव अर्यालले आफ्नो चुरोट नफालीकन घाँटी बसेको स्वरमा थपे, ‘यहाँ आएपछि फेरि बहुलाएका होलान् । त्यहाँ सबैले ठीक भइसके भने होलान् । सुनेको कुरा खै के ? खै के ?’
आँखैअगाडि होचो–होचो, पुरानो झल्लु कालो कोट लगाएको एउटा पुरोहितजस्तो मान्छे के–के फत्फताउँदै नयाँ सडकको ढोकातिर दौडेजस्तो गरेर छिटोछिटो हिँडिरहेछ । के हिँडिरहेछ भन्नु अनियन्त्रित चाल छ । तर, रक्सी खाएर हिँडेको जस्तो भने लाग्दैन । सबै पछाडि हट्दै छन् ।
‘पछाडि हट...’, ‘पछाडि हट,’ एकजना कराउँछ । ‘यसले कोटभित्र खुकुरी पनि बोकेको हुन सक्छ । अस्ति झन्डै एक जनालाई छप्काइदिएको,’ अर्को व्यक्ति कराउँछ ।
‘पछाडि हट...पछाडि’ सबै एकै स्वरमा हामीलाई भन्दै छन् । त्यो व्यक्ति कतै नहेरी के–के गुन्गुनाउँदै अघि बढ्दै छ । तर, त्यो गीत भने होइन, कानमा आइपुग्दा त्यस्तो लाग्दैन ।
रोचक भन्छन्, ‘यसलाई चिन्यौ साकार ? उनी नै हुन् गद्य कविताका प्रणेता कवि गोपालप्रसाद रिमाल ।’
मलाई भाउन्न होलाजस्तो हुन्छ । मैले अत्यधिक मन पराएका क्रान्तिकारी कवि त यिनै रहेछन् ! ‘यिनको हालत किन यस्तो ?’ म उनको पछि–पछि दौडिन्छु । उनी नयाँ सडकको पुरानो–पुरानो ढल्लाजस्तो ढोकाबाट देब्रे लाग्छन् । ठ्याक्कै अगाडि पर्न पनि डर छ । झ्वाट्ट खुकुरी निकाले भने ?
उनी अगाडि–अगाडि, म पछाडि अलि–अलि काम्दै । उनी नजिकै रहेको महांकालस्थानमा रहेको देवीको मूर्तिअगाडि ठिङ्ग उभिन्छन् । देवीको अगाडि उभ्भिएर विनीत भावमा दुवै हात जोड्छन् र प्रार्थना सुरु हुन्छ– आफैंले बनाएको देवीको स्तोत्र । गुनगुन आवाज आइरहेछ, तर केही बुझिँदैन । म पनि त्यसबेला १५/१६ को अल्लारे ठिटो ! साहित्यिक रुचि प्रशस्तै छ । त्यस समयका सम्पूर्ण नेपाली कवि–लेखकहरूलाई श्रद्धा गर्ने, गाउँबाट राजधानी आएर आफैं कवि भएर हिँडिरहेको ठिटो !
देवीको स्तोत्र पाठ गरिरहेका कवि झट्ट पश्चिम म भएतिर फर्कन्छन् । म भाग्छु । मलाई नै लखेटेजसरी ती ‘फोहरी’, ‘सनकी’ कवि त्यही बाटो पहिलेकै जस्तो हिँडाइमा फर्कंदै छन् । म पनि स्वाँ–स्वाँ गर्दै दौडेर पहिलेकै समूहमा हाजिर जनाउन आइपुग्छु– पीपलको बोटमुनि ।
मानिसहरू फेरि गफ गर्न थाल्छन्, कहिल्यै नटुंगिने गफ–
‘बीचमा त उनलाई ठीकै भएको थियो ।’ ‘...प्रति’ जस्तो उत्कृष्ठ कविता त्यसै कहाँ जन्मन्छ ? त्यो कविता कति शक्तिशाली छ तिमीलाई थाहा छ साकार ?’
‘अहँ छैन त...!’
‘सप्पै त आउँदैन तैपनि केही हरफ सुन...!’
‘यहाँ लेनिन जन्मनुपर्छ
यहाँ बुद्ध जन्मनुपर्छ
...मैले तिमीलाई माया गर्छु भन्नुका सट्टा
म तिमीलाई गर्भाधान गर्छु भन्न सक्नुपर्ने...’
कस्तो सजग र सशक्त कविता !
‘ओ युवती, ओ रूपवती...यहाँ माया मात्र पर्याप्त छैन
अर्कोपल्ट भेट हुँदा यसरी नै
मैले तिमीलाई भन्न सक्नुपर्छ
म तिमीलाई माया गर्छु होइन
म तिमीलाई गर्भधारण गर्छु ।
आफूलाई देखिने आफ्नो सन्तानभन्दा
अर्को कुनै ऐना छ ?
ओ युवती... ओ रूपवती
म तिमीलाई ....!’
म कुरैकुरामा त्यही बोटमुनि अल्मलिएँ । हाम्रा ‘बहुलाहा’ तर सशक्त नेपाली गद्य कविताका प्रणेता गोपालप्रसाद रिमाल भने नगरपालिका कार्यालयदेखि सिद्धिचरणको घरकै छेउबाट झोंछे हुँदै लगनटोलतिर लागे । कसैलाई सोधेँ, ‘होइन यी कवि के झोंछेमा बस्छन् ?’
सँगै उभ्भिएका रहेछन् तुल्सीनाथ ढुंगेल । उनैले जवाफ दिए, ‘होइन उनको घर नै छ लगनटोलमा । घर पुरानो भइसक्यो, आजभोलि नै ढल्लाजस्तो...। तल छिँडी र माथि कोठा भएको घर । छिँडीमा दिसा बस्न मिल्ने र माथि भान्सा । त्यही घरमा समाजसेवी कृष्णप्रसाद रिमाल र गायक हरिप्रसाद रिमाल पनि सँगै बस्छन् । अंशबन्डा गर्ने हो भने एक/एक कोठा पनि पुग्दैन ।’
कसैले सरकारप्रति गुनासो पोख्यो, ‘यस्तो प्रसिद्ध कविको उपचारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्दैन ? कस्तो सरकार ?’
अर्कोले भन्यो, ‘भर्खर त राजाले ‘कू’ गरेका छन् । कांग्रेसको दुईतिहाइ भोटवाला सरकारलाई हटाएर पञ्चायत सुरु भएको छ । संविधान पनि भर्खर आयो नि ! खै मैले त हेर्न पनि पाएको छैन । हृषिकेश शाहले ड्राफ्ट गरेका रे संविधान । शोषणरहित समाजको स्थापना मूल उद्देश्य रहेछ यो संविधानको ।’
बिस्तारै साथीहरूको संगत छुट्दै गयो । आफ्नो पढाइ र जागिर खोज्ने कामतिर लागें म । पछि सुने, ‘उनको अकस्मात मृत्यु भयो । ‘आमाको सपना’ जस्तो कालजयी कृतिका स्रष्टा रिमालको साधारण मृत्यु भयो अकस्मात...।’
‘त्यो तिमी नै हौला भन्ने
मेरो जिन्दगीभरको सपना थियो’
तर, त्यो जिन्दगीभरको सपनाले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएनछ ।
विक्रम संवत् २०३१–३२ तिर निर्वासित अपदस्थ प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला भारतबाट मेलमिलापको नीति लिएर काठमाडौं आइपुगे । राजनीतिका साथै आफ्ना पुराना संस्मरणलाई लिपिबद्ध गर्नतिर लागे उनी । उनले ‘जेल जर्नल’ लेखे र वरिष्ठ वकिल गणेशराज शर्मालाई ‘आत्मवृत्तान्त’ बोलेरै लेखाए । पछि त्यो छापियो ।
यी दुई संस्मरणको पुस्तकमध्ये एउटामा कतै उनले भनेका रहेछन्—
‘अत्यन्त प्रतिभाशाली, इमानदार र क्रान्तिका संवाहक कवि थिए— गोपालप्रसाद रिमाल । उनलाई नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा राख्ने मेरो ठूलो इच्छा थियो । म प्रधानमन्त्री भएको बेला यो कुरा मैले सोचेको पनि हुँ । तर, मेरा केही मित्रहरूले मलाई त्यसो गर्न रोके । उनीहरूको नजरमा रिमाल राणाहरूका हितैषी र चाकरीदार हुन् । उनी बबरमहलमा मृगेन्द्रशमशेरलाई भेट्न गइरहन्थे । मलाई पनि उनीहरूको कुरा ठीकै लाग्यो । उनी नियुक्त भएनन् ।’
विपीको त्यो कुरा सत्य थिएन, अर्धसत्यचाहिँ थियो । उनी मृगेन्द्रशमशेरलाई भन्दा पनि उनका भाइ प्रसिद्ध साहित्यकार कवि जगदीशशमशेरलाई भेट्न त्यहाँ गइरहन्थे । जगदीशशमशेर राणा उनलाई निकै सम्मान गर्थे, माया पनि गर्थे । उनको घरको खाँचो पनि बेला–मौकामा टारिदिन्थे । हामीले पछि भेट्दा पनि जगदीशशमशेरलाई निकै उदार हृदयका भएको पाएका हौं । केदारमान व्यथितले प्रत्येकपल्ट हामीसँग भेटैपिच्छे एउटै कुरा गरिरहन्थे । त्यो कुराको पनि मलाई अहिले सम्झना भयो । ‘२००४ सालमा सरस्वती सदनको एउटा ठूलो कक्षमा एउटा बृहत् कविगोष्ठीको आयोजना भएको थियो । त्यो कविगोष्ठीमा संयोजक र प्रेरणा स्रोत नै जगदीशशमशेर थिए । सभापति पनि उनैलाई बनाइएको थियो । मैले नै राणाका छोरा, भाइ भएकाले जगदीशमशेरलाई सभापति बनाउन लगाएको थिएँ— राणाहरूको कोपभाजनबाट बच्न । त्यस बृहत् कविगोष्ठीमा उपस्थित राणाका केही नोकर–चाकरहरूले गोपालप्रसाद रिमाललाई कवितावाचन गर्न दिन हुन्न भनेर हुटिङ गरे । तर, जगदीशशमशेर राणाले उनीहरूको कुरा मानेनन् । उनकै सहमतिमा रिमालले बोल्न माथि उभ्भिएर जोसिलो शैलीमा एउटा ऐतिहासिक कालजयी कविता पाठ गरेका थिए । त्यो कविता थियो— आमाको सपना । त्यसैले पनि राणा–पुत्र कवि जगदीशशमेशर राणासँग र एक किसिमले उनका सम्पूर्ण परिवारसित कवि रिमालको सद्भावपूर्ण सम्बन्ध थियो ।’
प्रसिद्ध साहित्यकार निबन्धकार शंकर लामिछानेले भवानी भिक्षुको सम्पादनमा प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका ‘धरती’ मा लेखेका छन्, ‘रिमाल र म फुर्सदको समयमा कविताको खोजी गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको काँठतिर घुमिरहन्थ्यौं । एक ठाउँ एउटी राम्री तरुनी कठिनीलाई देखेर रिमाल विषयासक्त भएका थिए । तर, त्यो कठिनीले हामीलाई वास्तै गरिनँ । त्यही परिस्थितिको मृष्ठभूमिमा रिमालले एउटा कविता लेखेका थिए— पालेकी छोरी रहिछन्, पालेसितै बोलिनन्, हामीलाई वास्तै गरिनन्, हाम्रो रवाफ सहनै सकिनन् ।’ प्रगतिशील समालोचकहरूले उनको यो कवितालाई ‘प्रेम वर्गीय हुन्छ’ भन्दै प्रस्तुत कवितामा त्यो चेत देखियो भनेर रिमाललाई प्रगतिशील कवि थिए भनेर निकै व्याख्या गरेका छन् । रिमाल वास्तवमा कटुयथार्थवादी स्वप्नशील कवि थिए । भोगेको यथार्थलाई प्रस्टसित मनको चास्नीमा डुबाएर लेख्न सिद्धहस्त कवि थिए— रिमाल ।
आफूसँग गाँसिएको एउटा सानो अतीतलाई आज यसरी सम्झने कोसिस गरेको हुँ मैले । एसएलसीमा प्रथम श्रेणीमा प्रथम (बोर्ड फस्र्ट) उत्तीर्ण कवि गोपालप्रसाद रिमालको दु:खान्त कथाले मलाई बारम्बार झस्काइरहन्छ ।
मेरो विचारमा साहित्य र विरोध एकअर्कासँग गाँसिएको हुन्छ । ती एकअर्काका पूरक हुन्— फरक छैनन् । गोपालप्रसाद रिमालका ती युगीन कालजयी कृतिहरू जहिले पढे पनि त्यसले हाम्रो मनमा एउटा अव्यक्त र गहिरो विरोधको भाव उत्पन्न गर्छ । त्यो संवेदनशील उद्वेलनको स्वर नै आजको कविता हो र दिवंगत रिमाल प्रत्येक युगका लागि जीवित छन् हाम्रो अव्यक्त हृदयको गहिराइमा ।
प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७८ १९:०८
सन्चै छ तिमीलाई ?
जेष्ठ ८, २०७८ विमला तुम्खेवा
जीवन –जे सोच्यो त्यसको विपरीत रहेछ हिँड्दिन भनेको यो बाटो हिँडिरहेछु जसले मेरा दुःखका कथाहरुलाई यो बाटोजस्तै लामो बनायो ।
कस्तो होला तिमीलाई कल्पना गरें
आज म तिम्रै घरछेउको बाटो भएर आएँ
हाम्रो स्मृतिहरुले नमीठो गरी गाँज्यो
भित्र कतै दुखेजस्तो भयो ।
यति धेरै दुखिरहने सम्झना उहिले सकिजानुपर्थ्यो
जसरी तिमीले छोड्यौ ती तमाम कुरा
ती एकान्त लामा बाटाहरु
यी आँखाहरु जसलाई पढेर कतिपल्ट हामीले आफैंलाई भेट्टाएका थियौं ।
अझै सम्झना छ
त्यो दिन मुस्कुराएर सर्माएको तिमीले छिनमै थाहा पाएका थियौ
तिमीले बिर्सियाै नि ती स्मृतिहरुलाई ?
म सँगालेर राख्नेछु ती सबै ।
चिसो सिरेटोसँगै हिमाल हेरेर एकान्त त्यो चौतारामा बसेथ्यौं
आफूले भोगी ल्याएको विगतलाई सम्झिएर
अनायासै एकअर्कालाई हेरेर रोएथ्यौं
कारण केही थिएन आँसु नै झर्नुपर्ने
हामी त्यसरी उदास उदास हुनुपर्ने
हामी त प्रेममा लिन थियौं र पूर्ण थियौं ।
कुनै अखबारमा छापिनेछन् यी शब्दहरु
तिमीले त्यो बेला पढ्नेछौ र सम्झनेछौ मलाई
तिमी सन्चै छौ होला र आफ्नो जीवनमा खुसी
वर्षौंपछि तिम्रो घरको बाटो भएर आएँ
सायद यसो हुनु पनि मैले नसोचेको जीवनको सुन्दर जोग हो ।
प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७८ ११:३७